Malmö: Stortorget waxa uu la midyahay fagaarayaasha Muqdisho | Somaliska
Mid ka mid ah websiteyada cunsuriyiinta ayaa soo qoray mowduuc ay kaga hadlayaan in fagaaraha Stortorget ee ku yaala magaalada Malmö uu la midyahay fagaaraha Muqdisho. Qofka qoray mowduucaan ayaysan cadeyn in uu waligiis Muqdisho tagay ama xitaa in uu tagay Malmö.
Mubarik Abdirahman oo ah mudane ka tirsan goloha deegaanka ee Malmö isla markaana ku soo koray magaalada Muqdisho ayaa wargeyska Sydsvenskan wax ka weydiiyeen in fagaaraha Malmö uu la midyahay kuwa Muqdisho isagoo ku jawaabay:
“Fagaaraha Malmö wax uu kala midyahay Muqdisho ma jidho. Dhismayaashu isku mid ma ahan iyo isku socodka. Fagaaraha Muqdisho waxaa ka socota hawlo ganacsi oo balaaran balse kan Malmö wax dukaan ah kuma yaalaan.”
Cunsuriyiinta ayaa u isticmaalaya tusaale Muqdisho in ay ku dhaliilaan magaalada Malmö oo ay dad badan oo soo galooti ah ku noolyihiin balse mararka qaar ayay iska soo qoraan hadalo macno daro ah. Bal muxuu ka garanayaa Muqdisho? Waa midkee fagaaraha uu ka hadlayo?
Wiilkaan waxaa lagu haystaa da’diisa oo Sweden waa laga musaafurinayaa
Fadeexada daryeelka dadka waaweyn iyo ceebka ku timid nidaamkaas
Hadaladaas walagu yaqaanaa cunsuriyiinta. Hada kahor aniga oo baskiil wada ayaa oday igu qeeyliyay, markaasu yiri “baaskiilka tartiib u wad meeshaan muqdisho maha” kkkkkk. Marka qofka cunsuriga waa qof maskax ahaan u xanuunsan, hadaladoodana waxba lagama soo qaado.
Ina Adeer waa qolomaa ninka ku jira goloha deegaanka ee Malmö?
Fikrad aan lala dhicin 0 12
September 2, 2015 at 21:35
Kkkkkkkkk duli wa habar jeclo somaliland ow xurnimo usowada
Ina adeer waa Soomaali qoladiise ok …
Fagaarahaas ey kahadlaayaan anige waa tagay dhoor jeer waa fagaare ju tusaayo Sweden iyo side loogu noolyahay waxaad arkeeysaa dad badan oo kala nooc ah oo isdhex socdo oo sinabad ah oo buuq la aan iyo qeylo la aan kolleey waxeey ilatahay cunsuriyiinte waxaa dhibeyso nabada iyo wada noolaanshaha bini aadamka marke waxeey jeclaan lahaayeen in la iis faquuqo oo dad gooni ah in fagaarahaas loo ogolaado oo dadka kalane laga mamnuuco.fagaarayaashe Soomaaliya hadeey arki lahaayeen SaaS uma hadasheen Soomaaliya waa wadan waqti dheer dagaalo iyo bur bur ku jiray Swedenne waa wadan waqti dheer jiray oo dawladne ahaa dhowr qarni
September 1, 2015 at 22:56
Waa qolada abaaydaada damer qabiil dardarey ayaad tahey qandho af ku qurun laheedee.
September 2, 2015 at 00:13
waxaan ku weediinayaa chat roomkii soomaaliska maxaa ku dhacay miyaa la joojiyay mise meeshi hore baa laga badalay ii soo jawaab jimcaale adoo mahadsan